BUDDHIST TERMS' Dictionary: THREE BASKET - တိပိဋက
THREE BASKET - တိပိဋက
တိပိဋက (Tipiṭaka) - ပိဋကသုံးပုံ။
ပိဋကသုံးပုံသည် ၀ိနည်းပိဋက၊ သုတ္တန်ပိဋက၊ အဘိဓမ္မာပိဋက တို့ဖြစ်ကြ၏။
Three piṭakas; (lit.) three baskets.
The three piṭakas are the Vinaya piṭaka, the Suttanta piṭaka and the Abhidhammᾱ piṭaka.